पुरानै बोर्डमा आश्रम सञ्चालन : २ जना मात्र अपाङग - Purbeli News
पुरानै बोर्डमा आश्रम सञ्चालन : २ जना मात्र अपाङग
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०४, २०७५ समय: ११:३१:२९
बिराटचौक । मोरङको सुन्दरहरैचा १२ स्थित बिराटचौकमा सञ्चालित जीत अपाङग आश्रम अहिले दाताहरुकै भरमा सञ्चालन भईरहेको छ । दाताहरुले मासिक रुपमा संकलन गरिदिएको र बैँकमा जम्मा भएको रकमकै भरमा सो आश्रम सञ्चालन भईरहेको छ ।
यस क्षेत्रमा रहेको एक मात्र आश्रममा हाल २ जना अपाङगता भएका युवतीहरु मात्र रहेका छन । केही महिना अघिसम्म अरुपनि अपांगता भएका युवतीहरु रहेपनि उनीहरु आफनै घर फर्किएपछि हाल २ जना मात्र युवतीहरु रहेका छन । अपांगता भएका महिलाहरुका लागी मात्र आश्रय दिईने सो आश्रम सञ्चालक समितिका सचिब जीवन चाँपागाई बताउँछन ।
आश्रममा अपांगता भएकाहरुलाई खान,बस्न र निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था समेत आश्रमले नै गर्दै आएको छ । तरपनि कतिपय अभिभावकहरु अपांगता भएका मानिसहरु शिक्षा दिनुको साटो घरायसी काम लगाएर घरमै राख्ने भएका कारण पनि आश्रममा अपांगता भएकाहरु कम आउने गरेको चापागाँई बताउँछन । सो आश्रमका १ सय ५० जना आजीवन सदस्य रहेका छन ।
१४ लाख कुल पुँजीको ब्याजबाट सो आश्रमको खर्च धानिँदै आएको आश्रमकी कोषाध्यक्ष मैया श्रेष्ठ चापागाँई बताउँछिन । १० देखि १२ जनासम्म धान्न सक्ने आश्रमको अबस्था भएपनि अपांगता भएकाहरु सो आश्रममा कमै देखिन्छन । आश्रमले स्थानीय निकाय परिबर्तन भएको एक बर्ष बितिसक्दा समेत आफनो बोर्ड समेत फेर्न सकेको छैन । स्थानीय निकाय परिबर्तन भई सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नम्बर ११ भईसकेता पनि आश्रमको बोर्डमा अहिले पनि ईन्द्रपुर ४ नै लेखिएको छ ।
भर्जिन कथा र भर्जिन लोकेशनमा पुरानो बुलेट
पहाडमा पहिराे तरार्इमा बाढीले जनजीवन आक्रान्त
बिबाहमा हुने फजुल खर्च कटाएर नेत्रहिनलाई सहयोग
जिब्रोले निधार छुने अच्चमका युवाको फिल्म खेल्ने रहर
खोला जव सुस्ताउँछ, स्थानीयको भोक र निन्द्रा हराउँछ
एउटा पनि सार्बजनिक शौचालय नभएको खुल्ला दिशामुत्त नगर
खलासी दाई ! के सडक तिम्रो बाऊको बिर्ता हो ?
गरिब,जेहेन्दार र दलित बिद्यार्थीलाई समाजसेवी राईको सहयोग
काम गरेर देखाउने ईप्रका बेलबारी प्रमुख राईको दाबी